Muuri News Network » WAR CULUS: Beel Ka Mid ah Beesha Biimaal oo Aayahooda ka Tashatay Kadib…
WAR CULUS: Beel Ka Mid ah Beesha Biimaal oo Aayahooda ka Tashatay Kadib…
Dec 14, 2016 - Comments off
Inta lagu guda jiray doorashooyinkii Xubnaha labada Aqal ee Baarlamaanka Dalka Soomaaliya waxaa jiray khilaaf badan oo soo kala dhexgalay Beelihii ay ka dhaxeeyeen kuraasta qaar ee Baarlamaanka.
Beelaha uu qilaafka soo kala dhexgalay waxaa ka mid ahaa Beesha Daadoow(Biimaal) dhexdeeda, kadib karkii Ay cadaalad darro iyo dhibaato ay abuurtay Lafta Daa,uud, talaabadaasi ayaa waxa ay noqotay mid ay kawada caroodeen dhamaan odayaasha, waxgaradka, aqoonyahanada, dhalinyarada iyo Haweenka Beesha Saleemaal waxaana halkaasi Gebi ahaanba ku burburay kalsoonidii kadhaxeeysay Beelaha Daadoow dhexdooda.
Arintan ayaa waxaa ka danbeeyay shaqsiyaad horay sadbursi ku qaatay Xilal badan oo Beesha kawada dhaxeeyay Sida, Xoghayaha Joogtada ee wasaaradda Beeraha Maxamed Cali Keey, Ibraahim Cali Xaaji iyo Dadbadan oo arintan raalli ka haa. Soomaalidu waxa ay ku maahmaahdaa “INTAADAN FALIN KA FIIRSO” Beesha saleebaan oo Dhowreysay xiriirka iyo wadajirka Beesha Daadoow dhexdeeda ayaa digniin horay uga bixisay in arintan aysan dhicin sida qoraaladeenii ka hor doorashooyinka aad ku aragteen; waxaana macquul noqondoonin in Beesha saleemaan arintan ka aamusto oo waxbadan aan lawadaagi doonin hadaan ladaba qaban caanahan daatay.
Sidoo kale, waxaa jira shaqsiyaad Dhuuni raac ah oo garan waayay wadada saxda ah ee xalka iyo wadajirka Beesha Ku jiro Raggaas oo aan hubo in ay maanta ka shalaaynayaan wadadii qaldaneed oo ay qaadeen ka dib markii looga baxay balanqaad Been ah.
Raggan Dhuuni raaca Baa Bilaabay in ay soo abaabulaan shirar ay ku sheegayaan in ay mideeynayaan beesha Saleemaan oo xaqeedii ay raadinayaan; iyadoo wax lalayaabo ay tahay in ay yihiin raggii shalay sababta u ahaa in Xaqii lawaayo. Horaa waxaa loo yiri “ NIMAAN KUU FURI DOONIN YUUSAN KUU RARIN”.
Culimada iyo nabadoonada Beesha Saleemaan ayaa sheegay in aysan arintan lahayn wax marmarsiya ah ama Sabab ay Booskaasi ku weynkaraan ayna iyaga 100% xaq u lahaayeen. Nabadoonadan ayaa ku jawaabay hadaladaas kadib markii ay shaqsiyaad qaar ay ku hungoobeen in wada hadal furaan; iyagoo shalay ka aamusay cadaalad darada socotay lakiin Aamusnaantu waa calaamadda raalli ahaanshaha.
Gebagebadii; dhamaan inta wanaagga aragta ee samaha jecel ee Beesha saleemaan ayaa go, aan ku gaaray in aysan waxdanbe kala dhaxeyn doonin oo lakala gurtay ninwalbana rarka Dibigiisa Dhulkiisa haku furto, waxaa kaloo ay go, aan ku gaareen in ay katashandoonaan dhamaan arimaha Siyaasadda iyo dhaqanka beesha xaqoodana aysan cid danbe u wakiilan doonin.